Carruur badan ayaa markay saxaraDda jilicsan dhigaan dabadu guduud noqotaa, dabada ayaa inta badan xanuunta. Isticmaal marka hore waraaqadaha wax lagu masaxo oo aad biyo diiran ku qoyso. Hawo ku qalaji kadibna si fiican u nadiifi. Haddii dabadu noqoto guduud oo uu jirku cuncuno mari caanaha naaska. Boomaatooyinka qudhooda waa la isctimaalikaraa si jirka ilmaha loo ilaaliyo. Fadlan kala tasho kalkaaliyaha Rugta caafimaadka carruurta (BVC).